Tabera R: “Mila hadihadina ny “Raharaha Ratsimandrava”” | NewsMada
Tabera R: “Mila hadihadina ny “Raharaha Ratsimandrava””
“Hanoratra taratasy any amin’ny fitondram-panjakana izahay ato amin’ny antoko Kintana sy ny CRN. Hanao fanokafana ny fanadihadiana fa tsy azo apetrapetraka foana amin’izao iny fahafatesan’ny kolonely Ratsimandrava iny.”
Izay ny fanehoan-kevitry ny filohan’ny antoko Kintana sady tomponandraikitra eo anivon’ny Komitin’ny fampihavanam-pirenena (CRN), Tabera Randriamanantsoa, amin’izao fahatsiarovana ny faha-44 taona nahafatesan’ny filoham-panjakana sady lehiben’ny governemanta, ny kolonely Ratsimandrava, ny 11 febroary 1975, izao.
Samy niaiky avokoa ny rehetra fa olom-pirenena nanana ny heviny ny kolonely Ratsimandrava, araka ny nambarany. Avela fotsiny amin’izao ve izany ny hoe: iza ny namono azy? “Tsy midika izany fa hogadraina izay namono azy”, hoy izy. Tokony ho fantatra ny marina: iza marina ny namono ny kolonely Ratsimandrava? Mety efa maty ilay olona namono azy fa mba tokony ho fantatra hoe iza.
“Efa manomana taratasy hangataka any amin’ny filohan’ny Repoblika ny amin’ny tokony hanaovana fanadihadiana lalina ho amin’ny fahamarinana sy fampihavanam-pirenena”, hoy ihany izy.
Nahoana no izao, efa 44 taona aty aoriana, vao korofohana izany?